I-Blackberry Studio Cottage
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguStephen & Kristen
Indlu yangasese yabucala ixhotyiswe ngazo zonke izinto eziluncedo. Ibhedi ye-Queen, Ikhitshi eligcweleyo, Impahla egcweleyo, Igumbi lokuhlambela eligcweleyo, i-Cozy Backyard, i-Wifi, i-Smart TV, I-coffee maker, indawo yesidlo sakusasa, Indawo yokugaya amalahle kunye ne-fire-pit.
Imizuzu nje eli-10 ukusuka ekungeneni kwiParkway ebukekayo ye-Foothills yokufikelela kwiPigeon Forge, eGatlinburg kunye neGSM National Park. ICottage yethu yeNqila ibekwe kumthunzi weNtaba iBlackberry kwindawo yasefama yaseAppalachian.
Imoto emfutshane entle ukuya eFoothills Parkway, Townsend, Gatlinburg, Pigeon Forge naseKnoxville.
15 min ukuya eMaryville
20 min ukuya Townsend
Imizuzu engama-25 ukuya kwisikhululo seenqwelomoya iMcGhee Tyson
Imizuzu engama-30 ukuya eKnoxville
Imizuzu engama-35 ukuya kwiPigeon Forge
50 min ukuya eGatlinburg
Umbuki zindwendwe ngu- Stephen & Kristen
Usapho lwethu luhlala kwindlu yamatye ekupheleni kwendlela ngqo emva kwendlu.
UStephen & Kristen yi-Superhost